About Us | SONGLI BATTERY
UMphathi Jikelele ukubingelela
Dry imali Battery
Yome imali alo Battery
Kwavingcelwa alo Battery
Kwavingcelwa alo Gel Battery
Ibhetri yeBhola yoMbane
Ibhetri yokugcina iLithium
Eziphathekayo Power Supply Icebo
Ingoma yeBattery Group limited.
SongLi Ibhetri yenye brand battery yamandulo China
I-Songli Battery yasekwa ngo-1995, egxila kuphando lwebhetri oluphambili, uphuhliso, imveliso kunye nentengiso. I-Songli Ibhetri yenye yeempawu zokuqala zebhetri e-China. Iimveliso zeNkampani zisetyenziswa ngokubanzi kwizithuthuthu, iibhayisekile zombane, iimoto kunye nemizi-mveliso kunye nazo zonke iintlobo zeenjongo ezizodwa ezineentlobo ezingaphezu kwe-200 zamanani kunye neenkcukacha.
Emva kweminyaka engaphezulu kwama-20 yophuhliso, uSongli Battery uqhubeka nokukhula. Isiseko semveliso sigubungela indawo engaphezulu kwe-400,000 yeemitha zesikwere kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-2000. Ineseti epheleleyo yezakhiwo zefektri zangoku, izakhiwo zeofisi kunye nezakhiwo zeeflethi zabasebenzi. I-Songli Ibhetri iqhubele phambili kwimigca yokuvelisa ibhetri kunye netekhnoloji, kwaye ibisoloko isazisa ngokuhambisa iwelding yendibano ehamba phambili ezenzekelayo, oomatshini bokuzisonga kunye nezinye izixhobo. U-Songli Ibhetri uyasebenzisana norhulumente ekuphuhliseni i-Non-Cadmium Container Formation Technology yeebhetri, kwaye uhlala eyandisa inzuzo ye-self-brand. Umzi mveliso uvelisa phantse i-2,000,000 yeebhetri ngenyanga, kwaye amandla emveliso apheleleyo angaphezulu kwe-4,000,000 KVAh.
I-Songli Ibhetri iye yaba lishishini eliphambili, eliya ngokuthe ngcembe likhule libe lelinye lawona matshini mabenzi makhulu. Inkampani inenkqubo eqinisekileyo yokuqinisekisa umgangatho, kwaye ipasile i-ISO9001, i-ISO / TS16949 yokuqinisekisa inkqubo yolawulo lomgangatho. Ngamava atyebileyo kwimveliso yebhetri, inkqubo yokuyila egqibeleleyo, ubudlelwane obuhle kunye nabathengi kunye nokuthengisa kwangaphambili, ukuthengisa kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa, inkampani igcina ukuthengisa okuzinzileyo e-China nakwamanye amazwe kwaye inee-arhente zenkonzo kwizixeko ezininzi. Kumazwe aphesheya, ishishini landisiwe lafika kuMbindi Mpuma, eMelika, eAfrika, eMzantsi-mpuma Asia nakumazwe nakwimimandla engaphezu kwe-100.
Ukuze uthabathe inxaxheba kukhuphiswano lweemarike, iSongli Battery ikhule ngokukhawuleza ngobuchule bobuchwephesha, uphuhliso lobuchwephesha, intsebenziswano yokuzibandakanya, ukudibana kunye nokusebenza ngokudibeneyo. Inkampani ngoku iseke imodeli yeshishini leqela kunye ne-Hongkong Songli Group njengeyona nto iphambili, i-Xiamen Songli New Energy Technology Co, Ltd, i-Xiamen Songli yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kweli, i-Ltd kunye ne-Jin Jiang Songli Battery Co., Ltd njengezinkampani ezincedisayo, ukuthatha inxaxheba) kwizabelo zenkampani, ngelixa zihlala zidibanisa izixhobo zentengiso. Ityale imali kwaye ibambisana namashishini amaninzi ebhetri.
I-Songli Ibhetri ene " ezintsha kunye nokuzinikela " lomoya kwishishini " akukho ilungileyo, ngcono kuphela " yesitayile somsebenzi ukwenza uphawu lokuzibophelela, ukuzibophelela kuphuhliso lweshishini lase-China kunye nokwenza ixabiso elikhulu kubathengi. "Ukuzinikezela kwethu kusikhokelela ekubeni siqhubeke "sisikhuthazo esigcina ukuqhubela phambili.
& BE ukuya kutsho kumhla
idilesi:19 Floor, Rongxinsheng Operation Centre, Guanyinshan, Siming District, Xiamen City
Ungasifumana kula maqonga alandelayo
© Copyright - 2010-2019: Onke amalungelo agciniwe. 闽ICP备13020280号-1 Kufakwe Iimveliso - eKhaya - Mobile Site
Kwavingcelwa MF Battery , Best Motorcycle Battery , Motorcycle Battery , Kwavingcelwa MF Gel Battery ,Zonke Products